In-caaryada fudud, design raagaya.
Is-goys PC ah oo ku-jira oo buuxa.
Visor saari karo
Hawo-qaadis xad dhaaf ah
Easy si ay ula qabsadaan nidaamka taam.
Lambarka Moodalka Koofiyadda Moutain ee VM202
Muuqaalka Hawo-mareenno xoog leh, rakibida madaxa raaxada, naqshadeynta moodada
Kordhi fursadaha visor saari karo leh handarraabbadeedii
Laga soo bilaabo fuulitaanka dhaadheer ilaa safka dheer, faracyada farsamada, koofiyadda buuraha ee VM202 waxay dhiirrigelinaysaa raacitaankaaga iyada oo aan loo eegin meesha ay wadadaadu ku marayso. Qaabkeeda is haysta waxay bixisaa qoto dheer, caymis kalsooni leh iyo nidaam ku habboon oo la habeyn karo kabaha hawo qaadashada iyadoo la hagaajinayo taam. Marka lagu daro koofiyaddan awoodeeda qaboojinta horeyba u fiicneyd, waxaa lagu dhejiyay hydrophilic, anti-bakteeriyada suufka jiidan kara oo qaadan kara ilaa toban jeer miisaankiisa dhididka. Koofiyadda buuraha ee wadada ka baxsan wadada oo leh naqshad qaab-dhismeed hooseeya leh, daboolid weyn, hawo-qaadasho iyo cimri dherer adag. Diyaar u ah wax kasta oo ka socda sahaminta joogtada ah ilaa raacitaanka raadka gardarada ah. Koofiyadda baaskiillada buuraha ayaa kaa dhigeysa mid qabow oo raaxo leh, oo lagu daray ama muuqaal la rogi karo oo leexinaya qorraxda, roobka, burushka iyo laamaha.
Qalabka-polycarbonate-ka-buuxa oo buuxa oo leh EPS liner si looga hortago dulliyadaha iyo dheecaannada ka dhigaya muuqaal muuqaal wanaagsan. Khadadka isdhexgalka oo leh farqiga ugu yar wuxuu ka dhigayaa mid aad u nadiif ah qaabka-xariiq dhacdo haddii ay u baahan tahay tiknoolajiyad aad u sareysa oo caaryo ah iyo saxsanaanta EPS iyo Vacuum sameynta qalab caarya ah.
Mashiinka Mesh-Cool-dhamaadka Sare wuxuu timaha ka dhigaa mid qalalan oo qabow leh inta lagu jiro fuulista waxayna siisaa raaxo habboon oo hawo hawo leh, waxaan soo saarnay suufyo badan oo qalab cusub iyo tiknoolajiyad ah oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ODM: Silicone padding, antibacterial / bamboo, PC / PP lamination iyo TPU suuf aan xuduud lahayn.
Koofiyadda lagu cayimay suun khafiif ah oo dib loo warshadeeyay oo sidoo kale lagu soo bandhigi karo koox ka tarjumeysa, hoos-u-dhigga iyo xaashida silikoon, waxaan ku siineynaa xulashooyin xarig oo beddelaad ah: weave midabbo badan leh, bamboo iyo xargaha anti-bakteeriyada.
Si dhakhso leh ayaa loogu sii daayaa ITW maaddada Derlin POM si loo xoojiyo haynta iyo tijaabinta duubista si loo hubiyo badbaadada koofiyadda.
Isbedelada ku habboon waa dhakhso oo fudud in la sameeyo, nidaamka ku habboon waxaa lagu hagaajin karaa seddex meelood oo ka dhigi karaa midka ugu fiican ee raaxada leh marka isku dheelitirnaanta xiisadda leh rogista cinjirka cinjirka ah, naqshad fudud oo leh ST801 iyo qalabka POM ee qaybaha muhiimka ah ayaa si xoog leh u soo kabanaya, nidaamka si fudud ayaa loo beddeli karaa ka dib markii muddo dheer la isticmaalo.
Hore: Koofiyadaha MTB Baaskiil VM203
Xiga: E-Bike Mooto V01
E Koofiyad Baaskiil
Koofiyadaha Baaskiil Buur